Deuralisamachar – Page 15 – देउरालि समाचार
‘जाडोमा हुन सक्छ हृदयाघात’ – ख्याल राख्नुहोस् यी कुराहरु
कुनै न कुनै कारणले हामी सबै मुटुरोगको जोखिममा छौं। पहिल्यै मुटुरोगको जोखिममा रहेकाहरूका लागि त जाडो मौसम झनै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। जाडो मौसममा मुटुरोगबाट कसरी बच्ने ? यस विषयमा नागरिक दैनिककी पवित्रा सुनारले काठमाडौंस्थित ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिलसँग कुराकानी गरेकी छन् : यो सेवामा लागेको कति वर्ष भयो ? विशेषज्ञका रूपमा काम गर्न थालेको मात्र सात वर्ष भइसक्यो। नेपालमा मुटुरोग बढिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ नि ? यथार्थ के हो ? अन्तराष्ट्रिय रूपमै मुटुरोग बढेको छ। यस आधारमा नेपालमा पनि मुटुरोगीको संख्या बढेको छ। तर अहिले यसको एकिन तथ्यांक छैन। एकातिर मुटुरोग बढेको पनि हो। तर उपचार गर्ने चलन बढ्दै गएका कारण पनि मुटुरोगीको संख्या बढी देखिएको हो। मुटुरोग के कारणले बढिरहेको छ त ? हामीले जतिसुकै रोक्न खोजे पनि मुुटुरोग बढाउने कारणहरू बढिरहेका छन्। जुन मुट
आप्रवासी राेक्न राष्ट्रपति ट्रम्पले चाल्ने भए यस्तो ठुलो कदम
टिजुआना- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासी राेक्न अमेरिकाको मेक्सिकोसँगको सबै सिमाना बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिका र मेक्सिकोको सीमा क्षेत्रमा मध्य अमेरिकी देशहरूबाट आप्रवासीको आगमन जारी रहेको र त्यस क्रममा शान्ति सुरक्षामा बाधा पुगेको भन्दै उनले सीमानासँगै मेक्सिकोसँगको व्यापारसमेत बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका हुन्। आवश्यक परिस्थतिअनुसार सीमास्थित सुरक्षा फौजलाई शक्ति प्रयोग गर्न समेत आफूले अनुमति दिएको ट्रम्पले जानकारी गराए। मेक्सिकोको सीमा क्षेत्रबाट प्राय हन्डुरसका आप्रवासी हजार किलोमिटर यात्रा गरेर मेक्सिकोतर्फ आइपुगेका छन्। यसरी बलजफ्ती आउने क्रममा उनीहरुलाई रोक लगाउन सीमा बन्द गरिने उनले स्पष्ट पारे। ती अमेरिकी देशहरुमा परेका विभिन्न समस्याका कारण आफ्नो देशमा व्याप्त आर्थिक कठिनाई तथा हिंसाबाट बच्न उनीहरू अमेरिका जान चाहन्छन्। स्थानीय अधिकारीहरूका अ
सम्प्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सम्बन्धित पछिल्लो दुई विषय निकै आलोचित हुन पुगेको छ । यिनमा एउटा प्रहरी तालिम केन्द्र हटाएर राष्ट्रपति भवन विस्तार गर्ने र अर्को उनको सवारी साधनका लागि रु १८ करोड बराबरको रकम निकासासम्बन्धी रहेका छन् । यी विषयलाई लिएर उनको यति बढी आलोचना भइरहेको छ कि सायद उनले कल्पना पनि गरेकी थिइनन् । उनको आलोचनामा थुप्रै समाचार, लेखरचना, सम्पादकीय टिप्पणी, कार्टुन तथा चिठी प्रकाशित भइसकेका छन् । सामाजिक सञ्जालका भित्ता त कति रङ्गिएका छन् कति । तथापि विडम्बना नै मान्नुपर्छ, उनी भने चुइँक्कसम्म बोलेकी छैनन् । न उनका सचिवालयले नै बोल्न आवश्यक ठानेको छ । सरकारले भने बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनको बचाउ गरेको छ । गाडी खरिदको निर्णय अघिल्लो सरकारले गरेको र प्रहरी तालिम केन्द्र राष्ट्रपतिको भन्दा पनि प्रहरीकै सुविधाका लागि सार्न लागिएको सरकारी भनाइ छ । झुपडीको भित्ता च
‘दुई तिहाईको सरकार डामेर छाडेको साँढे होइन’
झन्डै दुई तिहाई बहुमतको प्रचण्ड जनादेश प्राप्त सरकारले नौ महिनाको कार्यकाल पूरा गरेको छ । यस अवधिमा सुशासन, विकास, समृद्धि र जनताका दैनिक जीवनका विषयमा तीव्र गतिमा काम होलान् भन्ने जनअपेक्षा भए पनि सरकार अझै ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा अल्झिएजस्तो देखिन्छ । त्यसैले सरकारको ‘पर्फर्मेन्स’लाई लिएर धेरै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय ढिला गरी सार्वजनिक गर्नेदेखि राष्ट्रपतिलाई महँगो गाडी खरिद तथा कार्यालय व्यवस्थापनको निर्णयलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । यस पृष्ठभूमिमा, तत्कालीन राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरू तथा र दीर्घकालीन सवालहरूका बारेमा सरकारका सोच, योजनाहरू के रहेको छ ? के जनअपेक्षालाई सम्बोधन हुने गरी चाँडै नै सरकार केही देखिने काम गर्दैछ ? लगायत अन्य समसामयिक विषयहरूमा केन्द्रित रहेर सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकु
स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन खोज्नु मानवीय स्वभाव हो । मानिसले जानाजान स्वास्थ्य बिगार्न चाहँदैन । उसले सकेसम्म स्वास्थ्य ठीकठाक राख्न खोज्छ । स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन खोजे पनि दैनिकजसो गर्ने सानातिना असावधानीले उसलाई गम्भीर समस्याले सताउँछ । वस्तु विनिमयका लागि दैनिकजसो प्रयोग गर्ने पैसा (नोट) बाट समेत मानिसले स्वास्थ्य बिगार्दै गएका छन् । नोट प्रयोगको असावधानीले उसलाई छाला रोगले दुःख दिने गरेको छ । यसो भन्दा तपाईं अचम्मित हुनुभयो होला । अचम्मित हुनुभन्दा सचेत हुने प्रयत्न गर्दा लाभदायी हुनेछ । ‘हामीले प्रयोग गर्ने नोटमा जङ्स, फङ्गल्स र भाइरस टाँसिएका हुन्छन्,’ चर्मरोग विशेषज्ञ डा. ललन खतिवडाले जानकारी गराए, ‘त्यस्ता नोट मानिसको छालामा पर्नसाथ सजिलै जङ्स, फङ्गल्स, भाइरस सर्ने गर्छ ।’ वस्तुबाट वस्तु विनिमय गर्ने युग हुँदै सुन, चाँदी, धातु, पित्तल र तामालाई विनिमयको भरपर्दो माध्यम बनाइए
फ्लाइट डिलेमा दोष कसको ?
जहाज कुर्दै यात्रु आफ्ना गन्तव्य पुग्नका लागि जब घन्टौं बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ विमानस्थल अस्तव्यस्त र एकदमै पट्यारलाग्दो हुन्छ । यस्तो बेला यात्रुलाई प्रत्येक मिनेट घन्टाबराबर र प्रत्येक घन्टा प्रत्येक दिनबराबर महसुस हुन्छ । यो जायज पनि हो । देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पछिल्लो केही समयदेखि बढिभन्दा बढी फ्लाइट डिलेका घटना सामना गरिरहेको छ । यदि हवाई यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने जाडोको मौसममा तपाईं यस्तै उडान विलम्बको कष्टदायी अवस्थाबाट गुज्रिनु पर्न सक्छ। यो विरक्तलाग्दो अवस्थाबाट प्रत्यक्ष रूपमा यात्रु पीडित भए पनि वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरू यसको मारबाट अछुतो छैनन् । ‘वायुसेवा कम्पनीले के चाहन्छ भने मेरो यात्रु तोकिएकै समयमा उडोस्, जसले गर्दा कम्पनीको प्रतिष्ठा बढोस् । मेरै जहाजबाट बढिभन्दा बढी यात्रुले उडान भरुन्,’ नागरिक उड्ड
राष्ट्रपति भण्डारीको लागि गाडी खरिद गर्न भिख माग्दै युवाहरु
काठमाडौं । केही युवाहरुले राष्ट्रपतिका लागि गाडी खरिद गर्न भन्दै राजधानीको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा भिख मागेका छन् । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको आधारभूत सेवा सुविधाहरु सम्बोधन हुनुको साटो जनताले जनताको लागि चुनेका जनप्रतिनिधि र सरकार प्रमुख नै विलासिताको पछि लागेको भन्दै युवाहरुले सांकेतिक विरोध स्वरुप एक रुपैयाँ भिख मागेका हुन् । सरकारले १८ करोड खर्च गरेर राष्ट्रपतिका लागि बुलेटफ्रुफ गाडीसहितको सवारी साधन किन्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णयको चौतर्फी विरोध भईरहेका बेला स्वतस्फुर्त रुपमा युवाहरु भीख माग्ने कार्यक्रमा सहभागी भएका हुन् । शनिबार बिहान पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा भेला भएका युवाहरुले ‘दान गर्नुहोस् पुन्य कमाउनुहोस्’ भन्दै सर्वसाधरणसंग एक एक रुपैया भिख मागेका हुन् । १८ करोड रुपैयाँको गाडी चढ्ने नेपालीको हैसियत नभएको र राज्यको ढुकुटी रित्याएर कसैको पनि विलासिताको चाहना पुरा गर